Marka safarka ee shirkadda oo ah saaxiibada college, waa si fiican u caadi in aan leeyihiin faahfaahin ah oo xaq ugu noqon lama filaan ah. Uunana socod meel aan lahayn laga filayo ama qorshaynta kasta oo ka hor si dhab ah waa sida ugu fiican ee ay ogaadeen khasnadihiisii ​​qarsoonaa. Waxaa ka baxo qolka ku filan oo xiiso leh iyo sahaminta dhibqabayaashooda. Sidaas, halkee adiga iyo saaxiibbadaad ka bilaabi doontaan marka aad doonaysaan inaad samaysaan daahfurnaan dhab ah adigoon haysan liis-hawleed adag? Sida aad guriga ka maqan ka heli kartaa daahfurtay ugu fiican? Maxay yihiin xulashooyinkaagu?
College	CollegeMates	Discoveries	safarka	Travelingtips